Mirehareha ho zanak’olona ambony : zanaka «assistant parlementaire», mahafantatra jeneraly, mpanolotsaina ary milaza ho « tsy azo atao na inona na inona », no noraofin’ny zandary, rehefa nandratra sy nampihorohoro olona tao amin’ilay toeram-pisotroana.
Tovolahy iray nisotrosotro teo an-toerana no nilan’izy ireo vaniny voalohany. Tsy namaly anefa ity farany, ka noborkeny teo amin’ny tanany ny sigara, sady notehafiny tehamaina. Tsy vitan’izay fa mbola nokendakendain-dry zalahy ihany koa ny tovolahy iray naman’ity farany ary naparitany ny zava-pisotro teo ambony latabatr’ireo, araka ny fanazavana. Tsy nisy namaly izy roa lahy lasibatra ary mbola noroasin’izy telo lahy tsy hijanona teo amin’ilay toerana raha tsy te hahita basy, matraque, big boss, araka ny fanazavana hatrany. Niezaka nandamina ny tompon’andraikitra tao amin’ilay bara sy ny mpanampy azy, kanefa daroka koa no setriny ary norahonan’izy ireo hakatona hatramin’ilay bara mihitsy. Nampitangorona olona mihitsy ny zava-nitranga araka ny fitantaran’ny tompon’andraikitr’ilay bar taminay omaly.
Niezaka nandamina ny tomponandraikitra tao amin’ilay bara sy ny mpanampy azy, kanefa mbola daroka ihany koa no setriny ary mbola norahonan’izy ireo hakatona hatramin’ilay bar mihitsy. Ny tena loza raha tonga teny ny zandary dia mbola nanindry bokotra ihany ireo milaza ho zanak`olona ambony. Tonga tao amin’ny biraon’ny zandary mbola nanompa sy nanositosika zandary. Ny zava-doza dia nampiasa ny karatry ny rainy, izay “assistant parlementaire” ny iray amin`ireo nahavanon-doza. Tafakatra eny amin’ny fitsarana ny raharaha omaly. Natao fanadihadiana lalina ireto lehilahy novonoina kanefa toa sarontsaromana fotsiny ny raharaha. Ny talata lasa teo dia efa niakatra fampanoavana fa nahemotra omaly satria voalaza fa tsy ampy taona ny iray. Omaly indray dia tsy ampy taona ihany koa ny iray hafa. Velon-taraina ireto mpitory ary milaza tsy afa-po amin`ny valim-pitsarana satria nahazo fahafahana vonjimaika ireo telo lahy. Mitombo isa hatrany ireo olona ambony na fianakaviana manampahefana voatonontonona anatina afera fanamparam-pahefana eto amintsika. Miverina ho fanjakan’i Baroa hanjakan’ny gaboraraka sy ny kolikoly, fisehosehoana ivelany sy kabary tsara lahatra fotsiny no atao.